ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမိတ်ဿယ၏ဆောင်ပုဒ် ~ HCF
Home » ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမိတ်ဿယ၏ဆောင်ပုဒ် » ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမိတ်ဿယ၏ဆောင်ပုဒ်
လူနာများကိုချမ်းသာပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သည် သင်တို့၌တည် ထောင် သောအချိန်နီးပြီဟု သူတို့အားဟောပြောကြလော့။
1.Heal the sick who are there and tell them, 'The kingdom of God is near you.'(Luke 10:9)
ထိုအခါ ကိုယ်တော်က၊ စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သော သူတို့သည် နည်းကြ၏။ ၃၈ထိုအကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှါ စေလွှတ်တော်မူမည် အကြောင်း၊ စပါးရှင်ကိုဆုတောင်းကြလော့ဟု တပည့်တော် တို့အားမိန့်တော်မူ၏။
2.Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful but the workers are few.
Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.” (Matt 9:37-38)
လူ၏အမှုကိုသာ ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့မဟုတ်၊ သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကို ဆောင်ရွက်သကဲ့သို့၊ ပြုလေသမျှ တို့၌ စေတနာစိတ်နှင့်ပြုကြလော့။
3-Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, (Col 3:23)
တဖန် ယေရှုက၊ သင်တို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိလေသတည်း။ ခမည်းတော်သည် ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ သည်နည်းတူ၊ သင်တို့ကိုငါစေလွှတ် သည်ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင်၊
4-Again Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.” (John 20:21)
သင်တို့သည် စားသော်၎င်း၊ သောက်သော်၎င်း၊ မည်သည့်အမှုကိုပြုသော်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထောက်၍ ခပ်သိမ်း သောအမှုကိုစ္စကို ပြုကြလော့။
5-So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.(1Cor 10:31)
သက်သေခံတော်မူချက်ဟူမူကား၊ ဘုရားသခင် သည်ငါတို့အားထာဝရဘုရားအသက်ကို ပေးတော်မူ၍၊ ၁၂ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရ။
6-And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son.
He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life. (1Jn 5:11-12)
ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဘော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင် သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။
7-If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.(1Jn 1:9)
လူ၌ဖြစ်တတ်သော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုသာ သင်တို့သည်ခံရကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံတော် မူသည်ဖြစ်၍၊ သင်တို့မခံနိုင်သော စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ရောက်စိမ့်သောငှါ အခွင့်ပေးတော်မမူ။ သင်တို့ သည် ခံနိုင်မည်အကြောင်း စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းအရာနှင့်တကွ၊ ထွက်မြောက်သော လမ်းကိုလည်း စီရင်ပြုပြင်တော် မူလိမ့်မည်။
8-No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provideaway out so that you can stand up under it.(1Cor 10:13)
ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုးစားလော့။ ကိုယ်ဥာဏ်ကို မမှီမပြုနှင့်။ ၆သွားလေရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မျက်မှောက်ပြုလော့။ သို့ပြုလျှင် သင်၏ လမ်းခရီးတို့ကို ပဲ့ပြင်တော်မူမည်။
9-Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding;
6 in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. (Proverbs 3:5-6)
ယခုတိုင်အောင် ငါ၏နာမကို အမှီပြု၍ သင်တို့သည် အဘယ်ဆုကိုမျှ မတောင်းကြသေး။ သင်တို့သည် ဝမ်းမြောက် စရာအကြောင်း စုံလင်စေခြင်းငှါ တောင်းကြလော့။ ထိုသို့ တောင်းလျှင် ရကြလိမ့်မည်။
10-Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.(John 16:24)
mhuthaw February 22, 2012 at 1:16 PM
ကျွန်တော် မည်သူနဲ့မျှအတိုက်အခံမလုပ်လိုပါ။ ထို့ကြောင့် မည်သို့သော အကြောင်းတစ်စုံတရာကိုမျှ မပြောလိုပါ။ မိတ်ဆွေပြောသလို ရှိတယ်ပဲ ထားပါ။ မည်သည့် ဘာသာ မဆို အကုန်လုံးတော့ မကောင်းနိုင်ပါဘူး။ ချွင်းချက်လေးတွေတော့ရှိမှာပဲ။ အခု ကျွန်တော့်ဆိုက်မှာ တင်ပြထားတဲ့ ဘလော့ကလဲ သူတို့ဘာသာထဲက ချွင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်မှာပဲ။ အဲလိုဘလော့ကို ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အဲဒီပိုစ်လေးကို တင်ထားတာပါ။ ဘာသာရေး တိုက်ခိုက်မှုအရ တင်ထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ မိတ်ဆွေထောက်ပြထားတဲ့ ဘလော့တွေကလည်းထိုနည်းတူပဲလေ။ ကျွန်တော် မည့်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမှ ရန်ငြိုးဖွဲ့ရေးသားခြင်း မရှိပါဘူး။ သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းတောင် စကားများဖို့အကြောင်းအရာပါလာ ပြီဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘက်ကပဲအလျော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီလိုပြောတာ မိတ်ဆွေ သဘောပေါက်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ လူမျိုးဘာသာ အတွက် အားထားရသော လူချွန်လူကောင်း ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်...
Ashin Acara. February 25, 2012 at 10:24 PM
ထာဝရဘုရားသခင်က မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကို အဓိကထား၍ သိမ်းပိုက်သည်မှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
မေးခွန်းများပေးပို့ရန် တောင်းဆိုလိုပါသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင် မေးခွန်းများပေးပို့ရာတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပေးပို့ခြင်းကို သည်းခံပါ။ မိတ်ဆွေသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်ပါကမိတ်ဆွေ၏မေးခွန်းတို့ကိုပေးပို့နိုင်ပါသည် - http://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html